रातभर देशैभरि पड्कियो बम, एनसेल टावर नै किन टार्गेटमा? कस्ले पड्कायो बम? हेर्नुस् – PathivaraOnline
Home > समाचार > रातभर देशैभरि पड्कियो बम, एनसेल टावर नै किन टार्गेटमा? कस्ले पड्कायो बम? हेर्नुस्
रातभर देशैभरि पड्कियो बम, एनसेल टावर नै किन टार्गेटमा? कस्ले पड्कायो बम? हेर्नुस्
admin February 22, 2019 February 22, 2019 समाचार 0
नख्खुमा भएकाे शक्तिशाली बम विस्फोटमा घाइते एककाे मृत्यु